China Medical Oxygen jenareta Chipatara Oxygen jenareta Medical Oxygen jenareta michina vagadziri uye vanotengesa | KANA
Medical Oxygen jenareta Chipatara Oxygen jenareta Medical Oxygen jenareta Midziyo
Okisijeni Kugona: 3-400Nm3 / h
Oxygen Kuchena: 93% -95%
Kubuditsa Kunetseka: 0.1-0.3Mpa (1-3bar) inogadziriswa / 15Mpa Kuzadza kudzvinyirira kwakapihwa
Kubuditsa (Nm³ / h)
Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h)
mhepo yekutsvaira system
Isu tinogadzira PSA okisijeni chirimwa tichishandisa yazvino PSA (Pressure Swing Adsorption) tekinoroji. Kuve inotungamira PSA oksijeni yekugadzira chirimwa, ndicho chirevo chedu kuendesa michina yeoksijeni kune vatengi vedu iyo inoenderana nematanho epasi rose uye zvakadaro iri nemakwikwi kwazvo akatemerwa mutengo. Isu tinoshandisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinotengwa kubva kune vakanakisa vatengesi muindastiri. Okisijeni inogadzirwa muPSA yedu jenareta jenareta inosangana nezvinodiwa zvemaindasitiri pamwe nekushandisa kwekurapa. Makambani mazhinji kubva kutenderera pasirese ari kushandisa yedu PSA okisijeni chirimwa uye vari kugadzira oxygen pa-saiti kumhanya kwavo mashandiro.
Yedu okisijeni jenareta inoshandiswa zvakare muzvipatara nekuti kuiswa kweoxygen gasi jenareta pane-saiti kunobatsira zvipatara kugadzira yavo okisijeni uye kumisa kutsamira kwavo pamaoksijeni masilinda akatengwa kubva kumusika. Nemageneral jenareta edu, iwo maindasitiri nemasangano ekurapa anokwanisa kuwana isina kumisikidzwa kuwanisa oxygen. Kambani yedu inoshandisa yekucheka-kumucheto tekinoroji mukugadzirwa kwe okisijeni michina.
Maitiro Ekuyerera Pfupi Tsananguro
Zviwanikwa zvePSA okisijeni jenareta chirimwa
Yakazara otomatiki- masisitimu akagadzirirwa kushanda asingatariswe.
PSA zvirimwa zvakaomarara zvinotora nzvimbo diki, gungano pane skids, yakagadzirirwa uye inopihwa kubva kufekitori.
Kurumidza kutanga-up nguva inotora chete maminetsi mashanu kuti ugadzire okisijeni nechena kuchena
Yakavimbika yekuwana inoenderera uye yakadzikama kupihwa kweoksijeni.
Durable mamorekuru sieve ayo anogara angangoita makore gumi nemaviri.
Pashure: Wepamusoro mhando PSA okisijeni chirimwa chiri kutengeswa kupisa kumaodzanyemba kweAmerica kumabvazuva kweAsiai nehunhu hwakavimbiswa nezve kugona kwakanyanya
Zvadaro: Maindasitiri Akakwira Kukosheswa Psa Oxygen jenareta PSA Oxygen Dura
Medical Oxygen jenareta Zvishandiso
Inotakurika Medical Oxygen jenareta
Psa Chipatara Medical Oxygen jenareta
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Oxygen igasi rinokosha mukutsigira hupenyu mu pasi, yakakosha muchipatara, medical oxygen p ...
Industrial High wevasungwa Psa Kwezvokudya Nemiti Genera ...
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 PSA okisijeni jenareta chirimwa chakagadzirwa uchishandisa advanced Pressure Swing Adsorption tekinoroji. Sezvo zvakanaka-k ...
Zvigadzirwa Zvakanakira Isu tinozivikanwa nehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi mukugadzira zvinwiwa zvemhepo okisijeni zvinovakirwa pane cryogenic distillation tekinoroji. Kugadzira kwedu kwakaringana kunoita kuti edu masisitimu egasi akavimbika uye ashande zvakanaka zvichikonzera kuderera kwekushandisa mitengo. Kuve kugadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu uye zvikamu, yedu yemvura o ...